Qiso aad u layaab leh oo ka dhacday Oman
Warsame Abdi Isak
qiso dhab ah oo dhacday
Mucjiso La yaab leh oo dhab ah oo ka Dhacday Magaalo Madexda Dalka Cuman ee (Masqad)
War deg deg ah Inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajucuun - Gabar Muslimad oo reer Cumaan ah oo Ilaahay u badalay Xayawaan aan la garanayn kadib markii ay dhulka ku xoortey quraanka Kariimka. Masqad, Cumaan
Masqad mobile :-379153
Sida ay qortay shabakada wararka afka carabiga eee lagu magacaabo Alnilin waxaa ka dhacdey dalka Cumaan qiso la yaab leh oo dadka xusuusisay awoodda iyo weynaanta Ilaahay kadib markii gabar dhalinyaro ah oo reer Cumaan ah ay ku tuurtey dhulka Kitaabka Quraanka Kariimka ah kadibna ay isku bedeshay Xayawaan aan la garaneny.
Gabartaas ayaa markii uu Ilaahay imtixaanaayay waxa ay dhagaysanayso heeso iyadoo si kor ah u dhagaysanayso, hooyadeedna ay ku ag akhrisanaysay aayado ka mid ah Kitaabka
Quraanka Kariimka ah. Gabartii ayaa iyadoo dhibsanayso Quraanka Kariimka Kariimka ah ku tiri hooyadeed:" War naga tag waxaa nagu dhibtey quraankaan aad mar walba na daba wadid". Hooyadii dhashay gabarta ayaa goobteedii iska fadhiday iskana sii wadatay quraankii ay akhrisanaysay.
Gabartii ayaa inta istaagtay waxa ay dhulka ku tuurtey Kitaabka Quraanka Kariimka ah kadibna hooyadii ayaa inta soo istaagtay waxa ay wadnaha ku qabsatay Kitaabkii Quraanka ahaa.
Gabartii ayaa markaas suuxdey oo waxa ka doorsoomay miirka iyadoo isla markii dhulka ku dhacdey Ilaahayna uu suuradeeda ama muuqaalkeeda u badalay xayawaan aan la arkeynin.
Inaalilaahi Wa inaa Ilayhi raajicuun. Ilaahow naga ilaali cadaabyadaada faraha badan ee noocyada Badan. Inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun.
Xasuuso mar walba Ilaaha ku abuurtey una toobad keen inta aanan waqtiga kaa tagin.
Nasiib Internet And Telphone Service Hargeisa/somaliland
By: moodaran_1@hotmail.com mobile +252-2-379153
waa qiso dhab ah oo ka dhacday gabadh ilaahay caasiday dalka Oman ee ka mid ah dalalka carabta
warsame Hargeisa Nasiib Internet And Telphone Service Branch Hargeisa/somaliland +252-2-379153